Top 10 Underrated Caribbean Islands | Otu Di na Nwunye
Caribbean na-ejikọta ya na nanị ịbụ ebe njem ụgbọ mmiri ezinụlọ, ebe a na-eburu otu n'ime ụgbọ mmiri n'elu oké osimiri, tụfuo n'otu ogige ntụrụndụ nke otu agwaetiti wee laghachi azụ elekere iri na abụọ maka ebe obibi ọzọ na ebe ọzọ. Eziokwu bụ, Caribbean na-enye ọtụtụ agwaetiti ndị dị oké ọnụ ahịa ụgbọ elu na ụgwọ nkwari akụ ọ bụghị nanị n'ihi ọnọdụ ihu igwe na-enweghị atụ, mana ọtụtụ ahụmahụ dị omimi na ahụmahụ ndị dị na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ agwaetiti ọ bụla. Nke kachasị mma bụ àgwà dịpụrụ adịpụ nke àgwàetiti ndị a dị ka ebe ndị a na-akụghị anya maka ebe ezumike dị jụụ.
Ọzọkwa, a kpachapụrụ anya n'àgwàetiti ndị a mara mma site n'iche naanị ebe ole na ole - Jamaica, Bahamas na Aruba bụ ndị na-apụta mgbe mmadụ na di na nwunye na-achọ àgwàetiti kachasị mma na Caribbean. Ọ dabara na ọ dị ọtụtụ ihe a ga-ahụ ma nweta site na mba 28 n'àgwàetiti ndị dị na Caribbean, yana ihe karịrị ụdị agwaetiti 7,000! E nwere ọtụtụ ihe kpatara ya njem na Caribbean, ma ebe a bụ ụfọdụ n'ime ọkacha mmasị anyị n'okpuru ọnọdụ radar na ihe mere anyị ji chee na ị ga-aga!
Otu n'ime agwaetiti ndị na-eme ka àgwàetiti ABC (tinyere Bonaire na Aruba), Curacao na-ebu oke osimiri dị iche iche dị egwu, mmiri doro anya nke ọma na ụfọdụ n'ime ụlọ ntụrụndụ kasị mma na ndị kasị dị ọnụ ahịa na Caribbean. Otu ihe nlegharị anya, akụkụ nke na-enweghị ntụpọ, Curacao nwere ihe dị n'uche maka ndị na-aga osimiri na ndị na-aga oriri na ọṅụṅụ, gụnyere ụfọdụ n'ime vistas kachasị mma na Caribbean nakwa otu ndụ abalị na-eto eto na obodo Willemstad, isi obodo. N'ikpeazụ, a na-ewepụsịa ABC na eriri ifufe ahụ, na-eme ka ihu igwe bụrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-enweghị isi kwa afọ maka ọmarịcha utopia.
Ikekwe ihe kachasị iche iche dị iche iche n'àgwàetiti ahụ ga-enweta bụ ụgbọ mmiri na Klein Curacao, obere agwaetiti nke dịpụrụ adịpụ. Curacao bụ, n'ezie, ihe na-ekpo ọkụ nke ọrụ ụgbọ mmiri na ọtụtụ ebe a ma ama ka ọ na-asọba ma ọ bụ na-egwupụta n'ụgbọ mmiri dịka Onye Nlekọta Ukwu, nke gbadara na 1978.
Ọtụtụ na-abata na Dominican Republic maka Punta Cana, obodo ndị dị n'ụsọ oké osimiri tinyere ihe oriri na-eri na ndị Caribbean na-achọ ịbụ ndị na- in Caribbean na-enweghị n'ezie in Caribbean. Otú ọ dị, Bayahibe na-enye ezigbo ahụmahụ na-enweghị atụ karịa Punta cana. Jiri uru nri na-edozi nri na mpaghara mmiri na-ekpuchi mmiri kwa ụbọchị, ọtụtụ ndị na-eto eto ma na-eto eto na-ebi ndụ n'egwú n'abalị. Kviar Show Disco & Casino Bayahibe bụ ebe kachasị amasị ka ọ bụrụ ebe ị na-agba egwu n'abalị, nwee ụfọdụ ihe ọṅụṅụ, ma nwee nsogbu ole na ole na tebụl blackjack.
E nwere ọtụtụ ihe mere ị ga-eji gaa Bonaire, ọ bụghị naanị ebe anyị kacha hụ n'anya na Caribbean, kama ọ bụ ebe anyị nwere mmasị n'ụwa. Obere, ndị a na-ejighị ma ọ bụ ndị na-enweghị ntụpọ, Bonaire bụ nrọ nke onye na-ahụ n'anya, na-egosi ụfọdụ n'ime mmiri kachasị mma na na-egwusi egwu na ụwa, nakwa dị ka ndụ na-akpali akpali na ahụmahụ ndị dị mma.
Jide n'aka ịga Klein Bonaire, obere ọdụm nke ala na-emegide isi obodo ndị njem nleta na isi obodo Kralendijk, ebe ụgbọ mmiri kwa ụbọchị ga-eme ka ị na-agba ọsọ iji nweta ahụmahụ zuru ezu. Echefukwala iri nri na ihe ọṅụṅụ gị, Otú ọ dị, n'ihi na Klein bụ kpamkpam enweghị onye bi na ya. Bonaire bụ ihe jọgburu onwe ya, na oke zuru oke dị ka ndị Caribbean na-esi n'ebe di na nwunye pụọ!
Nevis dị obere. Obere obere, na naanị 36 square kilomita. Otú ọ dị, ihe obere àgwàetiti ahụ enweghị oke ọ na-eme ka ọ baa ọgaranya. E nwere nanị so ọtụtụ ihe na-eme na paradaịs a na-adịghị mma, gụnyere mgbawa ugwu mgbawa, ịgagharị, ịma ụlọikwuu, ikpo mmiri na mmiri mmiri - ịkpọ aha ole na ole.
Ọzọkwa, Nevis dị okpukpu abụọ ka ebe a mụrụ Alexander Hamilton, 18th century American statesman na 1st Treasury Secretary na akụkọ ihe mere eme mba. A na-asọpụrụ Hamilton n'àgwàetiti ahụ dum, gụnyere njem nlegharị anya site na ụlọ ọrụ ihe ngosi nke ugbu a nke na-anọdụ na saịtị ebe a mụrụ ya. Ị ga-esi na Miami banye na St. Kitts dị nso ka ị bịaruo Nevis, mana nchịkọta ọzọ ga-adabara ya.
Grenada na-agagharị ma dị egwu, ọ bụ ezie na ọ na-elegharakarị ọtụtụ ndị agbata obi ya anya. O nwere ike ịbụ otu n'ime agwaetiti ndị kachasị emetụta na West Indies, ma nweekwa agbụrụ nke colonial nke ọma nakwa dịka ikuku na-adịghị mma. ịtụnanya nri. St. George, isi obodo nke agwaetiti ahụ, bụ ebe omenala jupụtara na ụlọ ngosi ihe mere eme na ịkpọbata ndị mmadụ.
Coyaba Beach Resort bụ ebe a ga-anọ, ebe ọ gụnyere ọnụ ahịa dị mma, ụlọ ndị mara mma na otu n'ime ụlọ oriri na ọṅụṅụ kachasị mma n'àgwàetiti ahụ - Arawakabana.
Saba bụ obere agwaetiti Dutch-Caribbean, na ọ bụ otu n'ime ndị mara mma. Akpọrọ ya "Queen Queen", agwaetiti ahụ na-erughị puku mmadụ abụọ, na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nhọrọ maka ndị na-achọ n'ezie na-apụ apụ na okporo.
Tụkwasị na nke a, Saba nwere ụfọdụ n'ime ugwu kachasị elu na Caribbean, na-eme ka ọ bụrụ ebe zuru oke maka ịgagharị na ịgba ugwu, karịa karịa 1,200 ụkwụ. Ụdị ndụ na Saba dị iche na nke ukwuu nke Caribbean - ngwa ngwa na oge ochie na obere ndụ abalị, ọbụna na ntụrụndụ nke ụlọ ọrụ ntụrụndụ na iri afọ ole na ole gara aga.
Nanị ebe ugwu nke Venezuela nọ Trinidad na Tobago, nke dị n'ebe ndịda nke Caribbean. O doro anya na Trinidad bụ nwanne ka ukwuu nke abụọ ahụ, ịbụ onye ka ukwuu, ndị ka na-arụ ọrụ na ndị ọzọ na-eme njem, ma Tobago na-enye ọtụtụ ihe. Isi ala na-ejighị ya, e nwere ebe ntụrụndụ ole na ole na Tobago dị ka Le Grand Courlan Spa Resort ebe okpomọkụ na-ekpo ọkụ kwa afọ, na-adị jụụ ma na-enweghị atụ. Tụkwasị na nke ahụ, Le Grand Courlan bụ ebe di na nwunye zuru oke n'ihi na ndị toro eto-naanị iwu!
Tobago bụ ihe dị ịtụnanya n'ihi ihe okike kachasị nke Caribbean agwaghi oke - bays. Tobago nwere ọtụtụ ebe a maara nke ọma maka ịkwọ ụgbọ, mmiri mmiri ma ọ bụ igwu mmiri. Nke ka mma bụ na ọtụtụ n'ime ndị a na-apụ site na ebe ole na ole "touristy" dị, ma na-anọgide na-enwe nchebe zuru oke.
Cayman Brac na Little Cayman
Cayman Brac na Little Cayman na-adọrọ mmasị na ọbụna ihe na-adọrọ mmasị karị, dịka ebe fọdụrụ ebe onye omekome ahụ bụ Blackbeard kwuru na ọ zoro akụ ya - eme atụmatụ na ihe karịrị $ 14 nde dịka ndekọ. Site na Cayman Ukwu ahụ, àgwàetiti ndị a na-enye ihe ndị dị egwu maka ihe ọkụkụ, ihe dị iche iche na-atụgharị ụgbọ elu.
Akụkọ ihe mere eme bụ na akụ Blackbeard zoro ezo n'akụkụ ebe a na-egwu nkume na-akọwapụta mara mma Cayman Brac. Nke a na-ebute elu ma dị ukwuu, na-adọta ndị na-arị elu elu ugwu na ndị na-eme njem na mgbakwunye na ndị dị iche iche na ndị na-achụ nta ahịa taa! N'ebe ndị ọzọ na-asọba nnukwu ọgba ndị gbasasịrị agbasasị n'akụkụ ụsọ oké osimiri ebe a na-achọta obere ọlaedo, ọlaọcha na nkume ọlaọcha n'ime afọ ndị ahụ!
Barbados bụ ihe ebumnuche dị ebube, zuru oke na njedebe mara mma, nke zuru okè maka udo, na-agagharị agagharị n'àgwàetiti ahụ. Ogige osisi botanical, ụzọ ụkwụ na oghere ndị dị n'ọhịa bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ebe nile, na-eme ka Barbados bụrụ ebe zuru oke na-emekarị ka ọ dịghachi na ọdịdị. Ụlọ nke Harrison bụ ebe magburu onwe ya maka ahụmahụ Caribbean pụrụ iche n'ezie, mgbe e mesịrị ị ga-esi n'ebe ọwụwa anyanwụ gaa na Bathsheba Beach ma ọ bụ n'ebe ndịda, ebe Mount Gay Rum igwe na-arụ ọrụ kemgbe 1703.
Na Barbados 'Coast Platinum, mmiri dị jụụ dị mma maka igwu mmiri, ịkọ agbọ ma ọ bụ ime ihe ọ bụla. Maka ndị na-anụ ọkụkụ na-eri nri, ebe a na-akụ azụ n'ụsọ oké osimiri nke Oistons dị mma iji gbanye aka gị na ịkụ azụ azụ na ndị obodo na ịmara onwe gị na nri Caribbean zuru oke!
Ọ bụrụ na ị gaa Puerto Rico, na ị kwesịrị, jide n'aka na ị ga-ebu obere ụgbọ mmiri gaa Vieques Island, paradaịs dị jụụ na nke dị jụụ jupụtara na ụlọ oriri na ọṅụṅụ, mangroves, anụ ọhịa na ihe osise mara mma. Nnukwu Ngwurugwu National Wildlife National Vieques bụ àgwà dị mkpa nke àgwàetiti a, ebe ọ na-edebe ọtụtụ n'ime anụ ọhịa Puerto Rican nke dị na ya ka a ghara ịhapụ ya ma chebe ya.
Naanị kilomita asatọ n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Puerto Rico dị elu, Vieques na-akọwa ụfọdụ n'ime osimiri ndị kasị mara mma na-acha odo odo na Caribbean, yana Bahía Bioluminiscente. Akpokwara "Bio Bays", ndị a bụ mmiri nke nwere ọtụtụ nde micro-organisms, nke a na-akpọ "dinoflagellates", nke na-egbukepụ n'ọchịchịrị maka nke abụọ mgbe ọgba aghara. Ọ bụ ihe dị ịtụnanya, na-echekwa na ị ga-enwe ike ịnweta mgbe ọ na-aga Puerto Rico. Mee ka igwefoto gị dị njikere!
E nwere ihe karịrị Caribbean karịa ụgbọ mmiri ma ọ bụ Jamaica. Na mpaghara nke na-akpali akpali, nke mara mma na nke sara mbara, ọnụ ọgụgụ nke mba dị iche iche dị iche iche dị iche iche karịa ọtụtụ ndị na-eche ma na-enye ahụmahụ dị iche iche pụrụ iche maka onye ọ bụla dị njikere iji ohere. Ọtụtụ mgbe, ihe ndị ọzọ "si n'ụzọ" bụ ndị ga-eju gị anya na ihe ndị ị na-echetụbeghị, nri ị na-atụbeghị na ụdị ndị ị na-ahụ ga-ezute n'ebe dị anya site na anya ndị njem. Mee nzọụkwụ si n'ebe ị mara, gbakwunyere n'ihu, ma nweta ihe niile Caribbean ga-enye.
Category: Caribbean, Di na Nwunye, History, kasị Popular, Nhazi njem Tags: barbados, bayahibe, kasị mma, bonaire, Caribbean, cayman brac, curacao, grenada, nevis, Puerto Rico, tobago, n'elu 10
← Ihe Ndị Na-adịghị Mma Iji Mee na Paris
Otu esi emefu 3 Days Na Nashville →
9 Comments na "Top 10 Kasị mara mma Caribbean Islands"
Nke a na-enye m nnukwu FOMO. Ha niile na-ada ụda dị ịtụnanya, a ga-atụkwasịkwa ha na ndepụta ọ bụla na-agbasawanye nke ga-ahụ ebe. Daalụ maka ịkekọrịta!
Daalụ Sarah! Nwee obi ụtọ na ọ bụ ihe ị na-enwe!
Nnukwu ndepụta! Saba anọwo na ndepụta m nke agwaetiti iji leta ebe m bụ nwata. Echetara m mgbe m hụrụ ya na eserese ngosi ma ọ bụ mgbe niile ka m bụ ebe m chọrọ ịga!
Ọ bụ ebe dị ịtụnanya, n'ezie! Daalụ Kanicia!
Nnọọ aka isiokwu! Ana m agbalị ikpebi ebe m ga-ala ezumike nká ma eleghị anya ka na-arụ ọrụ oge ụfọdụ ... ụdị nke dị na ABC Islands ma ọ bụ Dominican Republic. Aro ọ bụla maka nke ga-akacha mma na ihe kpatara ya?
Hi Cindi! Nke anyi choro bu Bonaire, n'enweghi nsogbu. Ọ bụ obere agwaetiti na ABC (dị ka ị maara), nke ahụ dị oke mma, kpamkpam nchebe, ndị mmadụ dị ịtụnanya, na ị ga-abụ nanị 2.5 hour ụgbọ elu si United States, dị ka Bonaire na-emeghe ụgbọelu ụgbọelu na Miami na July. Ụgwọ ahụ dị ntakịrị, ọ naghị ejupụta ya, ọ nwekwara ụfọdụ n'ime ihe oriri kachasị mma na ebe ọ bụla. Jiri nleta gaa ma nye ya echiche
M n'anya Jamaica na nri ha
Nke a bụ ezigbo ihe ọmụma banyere njem. Isiokwu a na-akọwa ihe niile n'ụzọ doro anya. Daalụ!